Usizi ingane nonina bewelwa yindlu | IOL Isolezwe
Usizi ingane nonina bewelwa yindlu
Isolezwe / 14 January 2013, 3:03pm /
AMALUNGU omphakathi abezama ukukhipha izimpahla ebezisele kule ndlu emuva kokutakulwa kukaNksz Delisiwe Sikhakhane obelele noLetho Sikhakhane oyindodana yakhe. Isithombe: MBALI KHANYILE
IMVULA ebihlasele isifundazwe iKwaZulu-Natal iholele ekutheni kushone owesifazane nengane yakhe abelele nayo endlini.
UNksz Delisiwe Sikhakhane (31) waseMlazi esigcemeni sakwa-J obedume kakhulu ngelikaMade nobelele nendodana yakhe endlini uLetho Sikhakhane (7), uficwe ngamalungu omphakathi besaphila kodwa begqitshwe wudaka futhi becindezelwe yizindonga zendlu.
UMnuz Themba Hlongwa ongelinye lamalungu omphakathi azibonele kwenzeka lesi sigameko ekuseni ngabo-4 ngoMgqibelo, uthe namanje usashaqekile umphakathi wakule ndawo obusendaweni okwenzeke kuyo lomshophi njengoba uNksz Sikhakhane nendodana yakhe beshonele phambi kwabo bezama ukubatakula.
“Sisashaqekile ngalesi sigameko esenzekile, okubuhlungu kakhulu nje ukuthi uMade ufe phambi kwethu simuzwa ekhala ecela ukuthi simsize, simtakule nengane yakhe,” kusho uMnuz Hlongwa.
Udadewabo kamufi uNksz Thulisile Sikhakhane naye obekhona ngesikhathi abantu bezama ukutakula udadewabo kanye nendodana yakhe abebecindezelwe yizindonga zendlu nodaka okuthiwa ubezikhalela ngezindleko zomngcwabo ethi akazi nokuthi uzomngcwaba ngani umufi, uvele wabhoka ngolaka ngesikhathi Isolezwe lifika.
“Ayikho into engingayikhuluma nani ngoba useshonile vele udadewethu. Ngakho-ke angifune muntu ozongiphathisa ngekhanda njengoba sengivele ngiphithene kumanje,” kuzikhalela uNksz Sikhakhane.
UMnuz Thabo Mofokeng okhulumela uMasipala weTheku, uthe ithimba labatakuli baMasipala seliqalile ukuhambela izindawo ezahlukene zaseThekwini ngenhloso yokuyobheka isimo njengoba izulu beliyidliva impelasonto yonke.
“UMasipala uvelile emndenini wakaSikhakhane ngenhloso yokuyohlola isimo. Olunye usizo sekungaba ukusiza umndeni ngezindleko zokufihla uma kungukuthi awunawo amandla,” kusho uMofokeng.
Imibiko yezangoma zezulu iveza ukuthi lizophenya kusukela namhlanje kuze kube uLwesihlanu esifundazweni bese ngoMgqibelo kubuye imvula enamandla.